Home » Okwu Parks Travel News » Disneyland, Anaheim, Orange County kwadebere maka ọkwa edo edo n'izu na-abịa
Dị ka nke taa, Tuesday, May 11, 2021, Orange County na ógbè ndị ọzọ dị na California ka agafere n'ọkwa ọkwa edo edo. Nke a bụ nnukwu akụkọ maka Anaheim, obodo dị na Orange County bụ ebe obibi Disneyland.
Ọnụọgụ nke ikpe ọhụụ nke Orange County agbadatala na 1.8 kwa ụbọchị kwa 100,000, na-etinye ya na ọdịda ugwu iji nweta ọkwa ọkwa odo.
Obodo ndị ọzọ abanyegoro na ọkwa odo bụ San Francisco, San Mateo, Sierra, Mendocino, Alpine, Lassen, Trinity, na Mono.
Nweta ọkwa ọkwa odo na-enye ike ịgbasawanye na ụlọ nri, ụlọ egwuregwu, ebe ihe nkiri, ogige ntụrụndụ, ebe egwuregwu, na ebe ngosi nka.
Obodo Orange, Santa Clara, Santa Cruz, Tuolumne, na Amador nọ ugbu a n'ogo oroma, ha niile dịkwa njikere ịkwaga n'ogo na-acha odo odo n'izu na-abịa ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ coronavirus ha na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-aga n'ihu na-ada. Ugbu a, ọnụego ọhụrụ nke Orange County agbadatala 1.8 kwa ụbọchị kwa 100,000.
Los Angeles bụ mpaghara izizi dị na Southern California iru elu edo edo n’izu gara aga. Nke a bụ ịmaliteghachi ọhụụ kemgbe COVID-19 gburu ihe karịrị otu afọ gara aga. Obodo ndị ọzọ abanyegoro na ọkwa odo bụ San Francisco, San Mateo, Sierra, Mendocino, Alpine, Lassen, Trinity, na Mono.
Usoro ndị a niile mgbanwe wetara 9 n'ime mpaghara 58 nke California n'ime odo ọkwa. Onweghi mpaghara meghariri azu, na achota ubochi nke Sunni State. Mpaghara 9 ndị ahụ nwere ihe dịka 30 pasent nke ndị bi na California ma ọ bụ ihe dị ka nde mmadụ 12.